Xog: Gaas oo afduubaya doorashada afhayeenka | Caasimada Online
Home Warar Xog: Gaas oo afduubaya doorashada afhayeenka
Xog: Gaas oo afduubaya doorashada afhayeenka
Garoowe(Caasimada Online) – Madaxweynaha maamulka Puntland C/welli Maxamed Cali gaas, ayaa bilaabay kulamo kala duwan oo uu la qaato xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland iyo masuuliyiin ka tirsan maamulkiisa.
Kulamada madaxweyne Gaas ayaa salka ku haya galaangalka uu u galayo in afhayeenka baarlamaanka Puntland loo doorto shaqsi ay si dhow iskula shaqeyn karaan, wallow aan si dhab ah loo ogeyn ruuxa uu la doonayo.
Ilaa xalay kulamo kala duwan ayaa ka dhacayay madaxtooyada Garowe, sababtoo Gaas ayaa doonaya in markaan baarlamaanka loo doorto ruux ka shaqeyn kara danaha Puntland.
Wararka ayaa sheegaya in safarka Gaas uu ku tagay magaalada Dubai uu kusoo saxiixay mashaariic cusub oo laga hergelinayo gobolka Bari, sidaasi daraadeed uu doonayo in shaqsi ay wada shaqeyn karaan laga dhigo afhayeenka baarlamaanka.
Maalinta Isniinta ee Todobaadkan ayaa la filayaa in lasoo doorto ninka noqono afhayeenka baarlamaanka maamulka Puntland.